ग्रेटर नेपाल निमार्णको लागि ‘युएनपिओ’ मा जान्छौं, जित निश्चित छ-फणीन्द्र नेपाल (भिडियोसहित)
‘सीके राउत पश्चिमा राष्ट्रबाट परिचालितः विखण्डनकारी’
प्रकासित मिति : २०७६ बैशाख ४, बुधबार प्रकासित समय : १३:११
(लामो समयदेखि ग्रेटर नेपाल निर्माणको लागि देशव्यापि अभियान चल्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त अभियानलाई सांगठनिक आकार दिदैँ अभियन्ताहरुले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, नेपालको नाम दिए । उक्त मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले, विभिन्न समयमा अभियानका कार्यक्रम चलाउँदा जेल, नेल समेत भोगेका छन । उनले ग्रेटर नेपाल बनाएरै मर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता समेत यस अघि नै गरेका छन । उनी पछिल्लो समयमा देश भित्रका भन्दा बाहिर गएर आफ्नो मुद्धालाई उठाउने गरेको देखिन्छ । यसबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेष्ण हुने गरेका छन । त्यस्तै तराईमा स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाउने सीके राउतलाई सरकारले राजनैतिक अधिकार दिएर सहमति गरेको छ, यसलाई ग्रेटर नेपालको अभियानसँग कसरी जोडेर हेर्न ? किन नेताहरु राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर बन्दैनन, यसमा कुन तत्वले काम गरिरहेको छ ? हामीले यस्ता विविध विषयमा फणीन्द्र नेपालसँग प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनले हरपल संवादमा राखेको धारणाको संवादीत अंश.भिडियोसहित…)
१) ग्रेटर नेपाल निर्माणको अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ? पछिल्लो जानकारी के छ ?
-ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्षको हैसिएतले म मार्चको २४ तारेखम जेनेभामा मानवअधिकार परिषद् सत्रमा पुगेको थिए । मैले त्यहाँ ग्रेटर नेपालको इतिहासमा कसरी मानवअधिकारको हनन भएको छ र त्यसको खोजीमा के कस्ता अभियानहरु चलेका छन भन्ने बारेमा आफ्नो धारणा राखेको थिए । त्यहाँ उपनिवेश पनि मानवअधिकारको हनन, हो र त्यसको विरुद्ध जनताहरु संगठित बन्दै गएको विषयमा म केन्द्रीत थिए । मैले भारतले नेपालको ६० हजार वर्ग किमि भूमिमाथि उपनिवेश कामय गरेको र त्यो उसले फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क सहित माग रोखेको थिए । त्यहाँ औपनिवेशका विरुद्ध संगै संघर्ष गर्ने विषयमा सहमति समेत गरिएको छ । मलाई लाग्छ संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिसदमा पहिलो पटक नेपालको आवाज पुगेको छ, ग्रेटर नेपाल निर्माणको अभियानमा यसको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नेपालको सुगौलि सन्धीमा गुमेको जमिन हामीले फिर्ता पाउँने प्रसस्त आधारहरु हुँदा हुँदैपनि त्यसको खोजिमा सरकार नलाग्नु दुखत विषय बनेको छ ।
२) सरकारले स्वतन्त्र मधेंशको अभियान चलाएका सीके राउतसाग सहमती गरेपछि कतिपयले तराई क्षेत्र नै असुरक्षित भएको भन्दै गएका छन, हामीले भएकै भूमिको सुरक्षा गर्न सकेका छैनौं, तर तपाई ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
-गएको २४ फागुनमा सरकारले स्वतन्त्र तराईको नाममा विखण्डनवादी गतिबिधि गरिरहेके सीके राउँत समूहसँग ११ बुँदें सहमति गर्यो । त्यो सहमतिले विखण्डनवादी गतिबिधि गर्नेलाई बल पुगाएको छ, सरकारले त्यसको बदनियत बुझ्नुपर्दथ्यो, त्यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तै (संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएनओ)मा देश भैसकेका मुलुकहरु दर्ता भएका छन भने उपेक्षित, औपनेविशीक र देश बन्ने आधार भएका मुलुकको मुद्धा उठाउनेहरुको लागि गठन भएको निकाय युएनपिओमा सीके राउतले तराईका जिल्लाहरु र भारतको केही भागलाई मिलाएर अर्को मुलुकको नाममा त्यहाँ दर्ता गरेको देखिन्छ । यसर्थ सरकारले त्यस्तो समहति गर्दा अलिक सोच्नुपर्दथ्यो भन्ने लाग्छ । र नेपालको अहिलेको क्षेत्रफलमा समेत विभिन्न पक्षबाट असुरक्षित बनेको भन्ने विषयमा पनि राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसमा ध्यान नदिए दुर्घटना आउँन सकछन ।
३) सीके राउत र सरकारबीचको एघार बुँदेंमा तपाईको देखेको राष्ट्रघात के हो ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
-त्यसभित्र सबै राष्ट्रियतामाथि समस्याका कुराहरु छन । त्यसमा जनमतको सम्मान गर्ने विषय मान्ने कुरा आएको छ, तर सीके राउतले भनेको स्वतन्त्र राज्यको विषयको जनमत संग्रहको कुरा हो, उनले जनताको मत ल्याएर अघि बढें भने सरकारले के गर्छ, त्यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ । यसले प्रचण्ड केपी ओली सरकारका केही मानिसहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा थाङ्नामा सुताएको प्रष्ट देखिएको छ । उसले अहिले पनि भनिरहेको छ, म शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मधेशलाई स्वतन्त्र राष्ट बनाउनको लागि अघि बढको छु, । अनि त्यसले राष्ट्रियतामाथि समस्या त ल्याउने नै भयो । तसर्थ देश टुक्राउने बदनियत राखेको व्यक्तिसँग सरकारले यस्तो खालको सहमति नगर्नुपथ्यो भन्ने लाग्छ । हामी त्यो समहतिको विरुद्धमा छौ, त्यसमालाई राष्ट्रघातको प्रकृयाका रुपमा हामीले बुझेका छौ ।
४) राउत र सरकारबीचको सहमतिले ग्रेटर नेपाल निर्माणको विषयमा कस्तो समस्या ल्याउछ, प्रष्ट पार्नुहोस् ।
-उक्त सहमतिले ग्रेटर नेपालको अवधारणामा आघात पारेको छ । तर पहिलो कुरा त नेपालको भौगोलिक अखण्डताको अवस्थालाई नै यसले समस्या ल्याउने देखियो । हाम्रो राष्ट्रियतामाथि समस्या आउँने भयो । उसले बैधानीक रुपमा स्वतन्त्र मधेश राज्यको मुद्दा उचालिरहेको छ । यो अहिलेको नेपाल र ग्रेटर नेपाको लागि पनि आपत्तीजनक छ । हामीले विभिन्न कारणले नेपालबाट खोसिएका भूभागहरु जोड्ने र विशाल नेपाल बनाउँने अभियान चलाइरहदा उनले भएको नेपाली भूमिलाई टुक्राएर अलग मुलुक बनाउने कुराहरु खुला रुपमा गर्न छुट पाउने विषय आपत्तीजनक छन । यो गलत भएको छ ।
५) यहाँ भएको नेपाली भूभाग नै असुरक्षित बन्दै गएको छ, तर तपाई ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई कतिपयले असम्भव भन्छन नि ।
-अल्वर्ट आइन्टाइनले हरेक कुरा सम्भव छ भनेका छन । उनले जबसम्म गरिदिैन तबसम्म मात्र त्यो असम्भव हुन्छ भन्नेमा जोड दिएका छन, त्यस्तै अरुले पनि यो विषयलाई नगर्ने नियतले असम्भव देखेका होलान, तर हामीले सम्भव देखेका छौं । यसका थुप्रै आधारहरु छन ।
६) राउतले तराईको क्षेत्रलाई युएनपिओमा अलग राष्टका रुपमा दर्ता गरेका छन, तपाईले फेरी ग्रेटर नेपालको सम्पूर्ण भाग सहित राउतले दर्ता गरेको भूभागसमेत गाभेर युएनपिओमा दर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, यो सम्भव छ ? दर्ता हुन्छ त, के लाग्छ यहाँलाई ।
–युएनपिओको काम, अधिकार र अगल राष्टको दर्ताका आधारहरुबारे त्यहाँ प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा खोसिएका क्षेत्रहरु समेत दर्ता हुन नपाउने भनिएको छ, तसर्थ त्यहाँ ग्रेटर नेपाललाई दर्ता हुनेमा म विश्वस्त छु । र त्यहाँ दर्ता भएपनि त्यहि संस्थाले हाम्रो पक्षमा भूमिका पनि खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
७) त्यो दर्ता प्रकृयाका लागि तपाई कहिले अघि बढ्नु हुन्छ ? योजना के छ ?
-त्यो विषयमा मैले केही साथिहरुसँग सल्लाह गरेको छु, त्यसको प्रकृया आजैबाट शुरु भएको छ । तर कहिले जाने भन्ने विषयमा खर्च, आवश्यक अन्य तयारी लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने छ । त्यसमा केही समय लाग्न सक्छ ।
८) नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रबाट परिचालित मानिसहरुले राजनीतिक प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँबाट आउने गरेका छन । राउतको अभियानलाई पनि त्यसमा जोडेर बोल्ने गरिएको पाइन्छ, उनी कताबाट परिचालित होलान, तपाईलाई के लाग्छ ?
-उनले उठाएको मुद्धाले संसारमा जजस्ले हतियार बेच्छन, त्यहीबाट परिचालि भएको संकेत गर्छ । पश्चिमा मुलुक नै उनको संरक्षक जस्तो देखिन्छ । स्वतन्त्र देश बनाउने भनेको त्यो द्धन्द्धमा जानु हो, त्यसको अवधारणा नै त्यहि हो । सरकारले जनअभिमतबाट समाधान खोज्ने भनेर गल्ती गरेको छ । देशमा यस्ता समस्याहरु आउँदा नेपाली सेनापनि सजग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । राउतले तराईलाई टुक्राउनकै लागी अहिले बैधानीक बाटो समातेको छ । उनले आफ्नो राज्यमा भारतीय क्षेत्रहरु समेत जोडेका हुनाले उ भारतको समेत विरुद्धमा देखिन्छ । यसले ग्रेटर नेपालको विरुद्धमा भारत र भारतकै विरुद्धमा राउत आउँनुले यसमा युरोपियन राष्टहरुको योजना प्रष्ट देखिन्छ । राउतलाई विभिन्न हिसाबले हेर्दा पश्चिमा राष्टबाट परिचालित भएको भन्न सकिन्छ ।
९) उसले त सीके राउत र ग्रेटर नेपाल दुबै भारतको निसानामा परेको देखियो, के तपाईहरुबीच एकता वा सहकार्य हुन्छ ? के सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
-यो असम्भव । हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौं, राउत विखण्डनकारी लाईनमा छन, हाम्रो चरित्र नै फरक छ । तसर्थ भारतको विरुद्ध जस्तो देखिएकै आधारमा राउतसँग हाम्रो सहकार्य हुने कुरै हुन्छ । हामी त ग्रेटर नेपालको अभियानमा छौं।
१०) तपाईले युएनपिओमा ग्रेटर नेपाल दर्ता गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, तर जहाँ दर्ता गर्ने हो त्यो पश्चिमा राष्ट्रमा पर्दछ, यसबाट तपाईको मुद्धाले निकास पाउँछ भन्ने आधार के ? पश्चिमा राष्टबाटै तराई विखण्डन गर्न राउत परिचालित छन पनि भन्नुहुन्छ, नि ।
-यसको मुख्य आधार भनेको असंलग्न राष्ट, भुमि खोसिएका क्षेत्रहरुले पनि अलग राष्टका रुपमा दर्ता गर्न पाउने भन्ने युएनपिओको प्रष्ट नीति हो । यसमा हामीले आफ्नो आधारहरु देखाउँदै दर्त गर्ने प्रकृयामा जान्छौ तर न्याय नपाइने वा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषय त्यतिबेला देखिहाल्छ नि । यदि उसले हाम्रो ग्रेटर नेपाल दर्ता गरेन भने उसको नियत प्रष्ट हुन्छ, अनि अर्को अवस्था उत्पन्न होला ।